Ọ ka mma ịhọrọ ọkpụrụkpụ ma ọ bụ obere pvc egwuregwu flooring? -News-Topflor China amachi
Echiche:52 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-11-13 Mmalite: Saịtị
Ka ọ dị ugbu a, PVC ụlọ a na-ewu ewu na-ewu ewu, yabụ mgbe ị na-ahọrọ ụlọ egwuregwu PVC, ị ga-ahọrọ ma ọ bụ nke gịrịgịrị? Ka m kọwaara gị.
Sportslọ egwuregwu PVC bụ ụdị ihe eji achọ ụlọ, nke nwere uru nke ịgbachi nkịtị, nke na-enweghị amị amị, mgbochi seepage, mgbochi oge, na-abụghị nke combustible, mgbanwe, adaba na ngwa ngwa. Ya mere, ngwa nso nke ịkwanyere egwuregwu flooring dịkwa nnọọ mbara. Ọ bụghị naanị na ndị mba ọzọ na-ewu ewu, mana ọtụtụ ndị bi n’obodo ukwu na obodo dị iche iche na-eto ma na-amata ya. Enwere ụlọ egwuregwu PVC na ogige, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ ọrụ ọfịs, corridor ụzọ ụgbọ oloko, mgbatị ahụ na ebe ndị ọzọ.
Egwuregwu PVC egwuregwu bụ ala a na-ekpuchi ekpuchi, nke bụ nnukwu eriri na obosara nke mita 1.8. N'ihi ihe dị iche iche, usoro na ojiji, ọkpụrụkpụ nke ụlọ egwuregwu PVC dịkwa iche. Ma ịkwanyere egwuregwu flooring bụ n'ozuzu thicker karịa azụmahịa flooring, ma ọ ga-emetụta ndị egwuregwu arụmọrụ na-echebe arụmọrụ nke ịkwanyere egwuregwu flooring. Yabụ, ọtụtụ mmadụ nọ n'obodo kwenyere na thicker PVC egwuregwu ahụ, ọ ga-eme ka egwuregwu egwuregwu PVC dịkwuo elu ma bụrụkwa ọrụ ndụ. Ya mere, na ọkpụrụkpụ nke ịkwanyere egwuregwu flooring aghọwo na-elekwasị anya nke ọtụtụ ndị na-azụ.
Otú ọ dị, na ndụ n'ezie, ọkpụrụkpụ nke ịre egwuregwu PVC abụghị ihe na-egosi ogo ya. Okpukpo osisi PVC na-adịkarị n'etiti 3.8mm-7.0mm, nke bụkwa ọkpụrụkpụ egwuregwu PVC na-eme n'oge egwuregwu.
Obosara nke ala egwuregwu PVC na-ekpebi ahụmịhe egwuregwu nke onye na-eme egwuregwu ma metụta ndụ ya.
(1) Mkpokọta ọkpụrụkpụ nke ịkwanyere egwuregwu n'ala na-ekpebi mmetụta nke iji. Plasticlọ plastik PVC nke otu ihe owuwu ahụ, nke dị n'ala ala egwuregwu PVC, nke ka ukwuu na-agbanwe agbanwe, nke dị nro na nke kachasị mma ọ bụ ịbanye. Okwesiri ighota ebe a na "nkpa" mmetụta nke "ala PVC" na "ala egwuregwu" di iche.
(2) ịkwanyere egwuregwu flooring ike na-eji na 5-8 afọ. Okpukpo, ogo na iwu nke akwa na-eguzogide akwa na-emetụta ọrụ ndụ nke ala PVC. Standard ule results na-egosi na 0.55mm oké eyi-eguzogide oyi akwa flooring ike ga-eji ihe dị ka afọ 5 n'okpuru nkịtị ọnọdụ; 1.2mm oké eyi-eguzogide oyi akwa flooring ike ga-eji n'ihi na ihe karịrị 8 afọ. Adabaghị nwụnye nke ịkwanyere egwuregwu flooring nwere ike mfe na-emepụta egosipụta na-ebelata ọrụ ndụ. Ya mere, mgbe wụnye ịkwanyere egwuregwu flooring, nditịm soro echichi usoro.
Ihe edere n'elu bụ ihe ọmụma dị mkpa banyere ọkpụrụkpụ nke ala egwuregwu PVC. Enwere m olile anya na ị nwere ike ịghọta na etu otu egwuregwu egwuregwu PVC siri dị, ọ dị mkpa ikpebi dịka ọnọdụ dị na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ na saịtị ahụ. Dịka ọmụmaatụ: ụlọ ọrụ yoga, ụlọ ọrụ ịgba egwu na oge egwuregwu ndị ọzọ na-agagharị agagharị, nke chọrọ ngbanwe dị elu na ịdị na mbara ala, enwere ike iji ụlọ egwuregwu PVC gbara ọkpụrụkpụ; mgbe enwere ọtụtụ mmadụ na iji ya, ihe na-eguzogide ọgwụ Gri ihe egwuregwu PVC; ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mma, ị nwere ike họrọ elu ọkpụrụkpụ ịkwanyere egwuregwu n'ala.